MASINA izay naneso ahy hoe "VO COC" - Ny Tany Masina any Vietnam
Inona ny "Vo Coc"? Izay no anarana iantsoako irery rehefa mahita ny endriny ”fa ​​tsy miaiky ny niandohany - avy amin'ny ala na ny saha - hotononina anarana amin'ireo "Mpitsangatsangana antsy". Ny haiady martial izay ampahafantariko dia “Võ rừng - arts martiaux jungle” or “Võ ruộng - milalao haiady”, “Võ đường phố - haiady haiady an-dalam-be”, “haiady haiady”, na “Võ giang hồ - arts martiaux wanderer”?!
Nandritra ny fahazazako dia mbola tsy nahita olona nanao an'io haiady io aho, mba henoy fotsiny, vonjeo fotsiny Endrika tigra (tigra), Monkey endrika (style monkey) Endrika bibilava (fomba menarana) na Endrika endrika Phoenix amin'ny tanana avo toy ny elatra. Amin'ny ankapobeny dia matetika ny olona no maka tahaka ny fihetsehana, ny fihetsiky ny biby hamorona ny haiady ho fomban'ny biby hiady ho an'ny fiarovan-tena amin'ny voalohany. Saingy matetika ny olona tsy miraharaha ny saobakaka. Faritan'izy ireo ve ity karazana haiady ity amin'ny Tieu Ngao Giang Ho or Anh Hung Xa Dieu? Na avy amin'ny firenena iray any Afrika - misy tandroka rhino roa - na any Azia atsimo atsinanana - miaraka amin'ny tandroka rhinoceros - tsiambaratelo miafina, na any anaty ala mikitroka, na faritra be honenan'ireo ghettos mahantra ?!
Andro tolakandro io… tadidiko. Ankizy tany am-pianarana aho tamin'izany. Avy tany am-pianarana aho vao nody teo am-baravarana - teo amin'ny lalamby - teo amin'ny faritry ny vavahady 1, Saigon. Nihaona a "Bandy tavoahangy" mipetraka eo ambony vato. Eo an-damosiny - gony, eo an-tongony - alika mavo. Nipetraka mangina izy, niandrandra fa tsy mahamarika ahy - zazalahy iray izay nijoro teo alohany ho andriamanitry ny tany. - Avy aiza ianao? “Bobo?”
Ny feoko toy ny "Mikorontana ao Saigon" nangataka ny fanamarihany nefa tsy nahatonga azy handinika.
Ilay alika miaraka amin'ny lelany ihany no mijery ahy toy ny fanaony "Miarahaba" ho an'ny tompony. Toy izany no izy "Mahay" Nampitony ny feoko aho.
- Andeha tsy mety ve?
- Tsia! Milalao fotsiny! ok?
Tsy namaly aho fa nanangana ny vavako aho hanontany:
- Olombelona tavoahangy ve ianao?
Nandondòna izy fa ny masony kosa nisy "Hafahafa" ho ahy. Dia tsara izany raha zatra tsara ho azy! Nipetraka teo anilany aho. Nokosinin'ilay alika ny rambony mba handrenesana tsara.
- Manana trano ve ianao?
Akombaho ​​ny lohany.
- Eny ary! Maizina, mijanona eto ianao.
No nijery ahy izy?
- Sa tsy maninona?
- Eny hoy aho amin'ny lehiben'ny fianakavianana.
Toa izao aho "Mpitarika" nefa mbola mihinana "Andian-jiolahy".
Nanomboka teo aho "Namana roa" - izy sy ny alika. Isaky ny maraina dia nitondra kitapo izy hakana ireo fitaovana very tamin'ny làlam-by hatrany amin'ny vavahady 1 ka hatramin'ny kilometatra 11 ary avy eo dia nizotra nankany amin'ny Go Vap, Di An. Nihazakazaka toy ny Te Thien manampy ireo moanina Tam Tang, nandeha ary niverina tamin'ny "Lalana sada". Ny tolakandro dia niverina nody mandry teo amin'ny dabilio akaikin'ny lalana ireo mpampianatra sy mpianatra.
Sary: Vo Coc - Artista haiady
Nony maraina ny andro, nazava ny andro dia niverina maraina ny zazalahy tavoahangy, nitazona ny harona izay nisy fitaovana simba sasany. Ny tavoahangy, vazy, vilany tapaka, vilany tsy misy ambany, tavoahangy saut (baoty parasy) amin'ny lamba rovitra, ny pataloha efa rovitra… Toa “entana vaovao” izy ireo - izay tsy nahoako. Avy eo dia nisambotra aho - feo manjavozavo.
- Andao hankany amin'ny tsena Thai Binh.
Nihatokatoka izy avy eo niaraka tamiko. Nihazakazaka nanenjika anay ilay alika - toy ny mandeha anaty traikefa vaovao - miampita ny arabe izay tsy mahalala na inona na inona ny fiainany, mpanaraka iray. Raha ny momba ilay zazalahy tavoahangy dia saika tsy fantatra intsony ny lalana mankany amin'ny tanàna satria tsy izany no fomba tsara ahazoana ny ainy. Eo amin'ny arabe misy làlana telo, eo ankavanan'ny tobin-tsolika misy ny Tsenan'i Thai Binh, eo ankavanana dia ny teatra Khai Hoan, nijery ny tany an-tsaha niaraka tamin'ny vahoaka marobe nivory teo amin'ny bozaka, niezaka izahay jereo hoe inona no nangonin'ny mpandeha hijery "Fampisehoana fanafody martial shandong". Saingy lehilahy frantsay roa izy ireo - lehilahy kely ary lehilahy lehibe manana bera. Nanao haiady tamin'ny akanjo fanamiana fotsy izy ireo, fehikibo mainty ny iray ary fotsy kosa ny iray.
Vao nahita ahy aho dia nisambotra ahy tany amin'ny bozaka kely iny lehilahy kely iny, namely ahy tamin'ny teknika Judo izay nahatonga ahy mianjera manoloana ny lanitra ary izy nitehatra ny voziko malalaka. Surprise! Tsy nisy nahalala aho fa nanetsika sandry sy tongotra, avy eo nifangaro! Tampoka teo dia nitsofoka tampoka ilay zazalahy tavoahangy ka nikapoka ny lohan'ny lehilahy frantsay frantsay iray izay nahatonga azy tsy taitra ahy. Dia nitsangana aho! Nandoa mafy be ilay alika! Avy eo mikorontana!
Avy hatrany dia nirohotra nisambotra ilay tovolahy tavoahangy ilay lehilahy frantsay lehibe dia niverina izy. Nanatona ny tratrany ilay lehilahy frantsay niasa tamin'ny paikady famonoan-tena. Niverina haingana ny zazalahy tavoahangy mba hialana amin'ny ankavia. Nanatona ilay lehilahy lehibe frantsay handoka ilay ankizilahy tavoahangy. Ny vatana rehetra dia gaga "Oh". Nisy niantsoantso "Mitandrema! Mitandrema!"
Nitsambikina niankavanana havanana ilay zazalahy tavoahangy. Tsy nahomby, niondrika hirika hisaotra ilay lehilahy frantsay antsy avy amin'ny tongony trousers. Io dia ilay lefona. Nihemotra lavitra ny vatana rehetra. Niverina niaraka tamin'ny alika aho avy eo ary nijoro niaraka tamin'ny mpiambina. Telo ny feony. Tamin'izany fotoana izany dia nijery ny tovolahy tavoahangy ny masony rehetra. Mbola nitondra ilay gony. Nibanjina ilay lehilahy frantsay izy hijery ny làlan'ny teknika. "Atsipazo ilay kitapo!" nisy niantsoantso. Navelany nidina ilay kitapo. Nanafika azy tamina lehilahy iray ny lehilahy frantsay. Nogadiny ny vatany avy eo, nandry niaraka tamin'ny tongotra nivoaka sy niditra, nifindra ho miankavia, miankavia, miankavanana toy ny rantsan-tongotra. Tsy nahalala ny handratra ny lehilahy frantsay, avy eo dia niondrika nahapaona teo an-tampon’ny lelan-tany. Ny vatana rehetra dia niantso hoe:
- Hey! Voasana, mitsambikina!
Raha tsy miteny "Thang Coc" - izao miaraka amina anaram-bosotra vaovao - nivadika toy ny tselatra voahosotra ary nodakan'ny tongotra roa tamin'ny tànana nihazona ny sabatra an'ny lehilahy frantsay. Niala tamin'ny tanany ilay bala dia nianjera tamin'ny ahitra. Thang Coc tafintohina haka ny sabatra mba "hanehoana" fa tsy nampiasa izany. Niantso mafy ny olona rehetra. Tao anatin'ny toe-javatra faran'izay tsy zaka, namely ny lehilahy frantsay Thang Coc Tsara marihina. Thang Coc nifindra mba hisoroka tampoka teo dia nisoka tampoka teo amin'ny fofon'ilay lehilahy frantsay. Noraisiny avy eo tamin'ny tanany ny tendany. Ny olona rehetra dia nitehaka mafy indray. Nisy lehilahy frantsay roa nanao sonia mba handositra ho any amin'ny trano mifanohitra amin'ny maro an'isa. Nihazakazaka izy ireo ary nihorakoraka “Mẹc xà lù! A - nam - mit (Fuck you, Vietnamese!) ”
Samy nanana telo taminay ny rehetra mba hitaky valifaty lalina. Indrindra indrindra fa ny alika dia natoraka tamin'ny lanitra. Avy eo mitazona! Ka arotsaho! Hooray. Ny alika dia nitomany mafy dia mafy. Nahatsiaro “fialonana” kely aho. Tsy nisy zava-bitany tamin'ity tolona akaiky ity fa "Mandehandeha, mandeha, manindroa". Saingy tampoka teo dia tsapako fa toa ny zana-trompetra dia toy ny hoe esophagus izy. Izy io dia nanenjika bebe kokoa, nanafika bebe kokoa ny tafika. Araka izany dia nanana ekipa mpanohana ny zazalahy tavoahangy. Matoky tena izy sady malady. Koa vita tsara ny ady. Ny olona rehetra dia nanohy nanipy ny alika tao! izany “Nihanihitra, nanenitra, nibontsina”.
Tamin'ny tranga voalohany nanombatombanana ity zava-bita ity, mendrika isa 10 ireo zazalahy tavoahangy. Ary nanana teboka 7 aho noho ny ady nataon'ny "tetika fiaretana". Na dia voasambotra sy nampijalian'ny mpanohitra aza aho dia nimonomonona fotsiny aho, tsy nanome andinindininy. Soa ihany fa voavonjy ara-potoana aho. Ka ny fahamendrehako dia tokony ho 8 isa. Saingy niandalana aho, nieritreritra fa tokony ho 8 isa ilay alika. Mazava ho azy fa io dia "mu mux" toy ny afom-basy “handrahona” ary hampihena ny fanahin'ny fahavalo. Taorian'io dia nahatsapa aho fa mendrika 9 ny alika.
Avy eo natokana ho azy avy hatrany ny rehetra. Taorian'izay dia tonga ny polisy ary niantsoantso mafy! Tratra tao anaty tsenam-barotra Thai Binh no lasibatra tao anaty tsena. Nanomboka teo dia nisy zavatra fanta-daza sy fiheverana azy tao an-tsaiko taminy ho namana na ho mpampianatra aza!
Indray andro dia nanontany ilay rahalahy aho:
- Hainao ny haiady!
Sary: Vo Coc - Nguyen Manh Hung
- Inona ny sampana haiady! Miresaka momba izany!
Izy dia nangina.
- Ny haiady? Toa izany!
Tsy nilaza koa izy!
Amin'ny alina volana manontolo, Thang Coc niantso ahy hanao fanaovan-javatra aho ary avy eo dia nanisy fofonaina. Androany taty aoriana dia nampianatra ahy ny hifindra tanana sy tongotra mankany amin'ny lalana efatra izy ary ny tongotra iray kosa nihemotra ary ny iray kosa nanosika. Avy eo izy dia nilaza tamiko hikasika ny tany amin'ny rantsan-tanana roa mba hizaha toetra ny herin-tanana. Avy eo, ario ny tongotra roa misolelaka ho mpandihy vehivavy.
Taorian'izay dia nampianatra ahy endrika iray izy "Saobakaka" izay mbola tsy hitako taloha tany amin'ireo sekoly haiady tamin'ny fiainako nanomboka tamin'ny Saigon ka hatrany Ma Lang, Nga Ba Chu Ia na Xom Cui ka hatrany Phu Lam. Avy eo mankany Japon, Frantsa, Etazonia, Italia,
Alemana, Oeclioslo Yisikia…, taorian'izay, tsy mbola nahita olona nanao izany karazana haiady izany aho!
Ary mbola tsy fantatro ny fototry ny "Thang Coc" Avy aiza izy ary iza ilay tompony. Marina tokoa, tsy maintsy haYe tompo izy. Ary nanao ahoana ny fiainany? Tsy nanadino izany fahafahana izany!
1. Profesora mpiara-miasa, Doctor of History.
◊ MASTERS izay manainga ahy "Vo Coc" - Vi-VersiGoo
◊ MASTERS izay manainga ahy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ MASTERS izay manainga ahy “Vo Coc” - Ar-VersiGoo
◊ MASTERS izay manainga ahy “Vo Coc” - Ch-VersiGoo
◊ MASTERS izay manainga ahy “Vo Coc” - Sp-VersiGoo
◊ MASTERS izay manainga ahy “Vo Coc” - Ru-VersiGoo
(Visited 2,215 fotoana, 3 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← NY FANAJORANA - FOMPOANA TRANO TRANITISY Vietnam
Mitady ny "VO COC" →
Comments Off amin'ny vondrona CONG Vondron'olona antokon'olona 54 any Vietnam
Comments Off amin'ny NUDE - Human-Nuts tapaka